Fur iPhone by IMEI qiimaha ugu fiican
Hadaad raadineyso sida furo iPhone by IMEI dhammaan dammaanadaha iyo qiimaha ugu fiican, ka dibna ku samee kalsoonida Actualidad iPhone iyo LiberaiPhoneIMEI. Si tan loo sameeyo waa inaad doorataa waddanka, kaaliyaha iPhone-gaaga oo geli IMEI-gaaga. Haddii aadan aqoon hawlwadeenkaaga ama haddii taleefankaaga iPhone-ka loo soo sheego xatooyo, sidoo kale waxaad haysataa adeeg la heli karo oo lagu ogaan karo.
1 Sidee loo ogaadaa IMEI-ka iPhone-ka in lagu furo?
2 Sida loo furo iPhone by IMEI?
Sidee loo ogaadaa IMEI-ka iPhone-ka in lagu furo?
Waxaa jira habab badan oo noo oggolaan doona soo hel IMEI-ka iPhone-keena, oo ka bilaabanaya mid guud oo laga heli karo taleefan kasta oo gacanta ah. Ugu fiican siyaabaha loo helo lambarkan Waa kuwan soo socda:
Laga soo bilaabo rada lambarka: waxaan tan ku guuleysan doonnaa innagoo fureyna barnaamijka Telefoonka, taabanaya Keyboard-ka oo aan galno koodhka * # 06 #. Lambarku wuxuu ka muuqan doonaa shaashadda. Si aan uga baxno, waxaan taabanaynaa OK.
Laga soo bilaabo goobaha iPhone: waxaan ku arki karnaa IMEI-geena adoo marin u helaya Settings / General / Information isla markaana hoos ugu sii dhacaya meesha aan ka akhrisan karno IMEI.
Raadinta kiiska iPhone: tani waxay noqon kartaa habka ugu fudud, inta aan sanduuqa agtiisa leenahay. IPhone IMEI wuxuu ku dhegsan yahay warqada dhajiska ah xaga dambe waxayna ku qorantahay lambar IMEI / MEID
Sida loo furo iPhone by IMEI?
Unlock iPhone by IMEAdeegii ay bixiyeen Actualidad iPhone iyo LiberaiPhoneIMEI ma sahlanaanin. Nidaamku wuxuu noqon lahaa kuwan soo socda:
Waxaan kala xulanaa waddanka u dhexeeya Spain, Mareykanka ama Mexico adoo gujinaya tabsyada ka sarreeya miiska bixiya adeegga.
Marka dalka la xusho, waa inaan dooranaa hawlwadeenka asalka ka ah iPhone-keena. Haddii taleefankeena iPhone-ka uu ka socdo shirkad kale ama waddan kale, waxaan riixeynaa "QAWADAYAASHA KALE" waxaanna awood u yeelan doonnaa inaan aragno liis aad u ballaaran oo waddamo iyo hawlwadeenno ah. Waa in la ogaadaa in kiiska Spain, aad awoodid sii daayo iPhone ka sidayaal waaweyns sida Vodafone, Orange ama Movistar iyo kuwa kale.
Marka xigta, waxaan galnaa IMEI-ka iPhone-ka oo aan dooneyno inaan ku sii dayno sanduuqa hoose ee qoraalka "Ku qor IMEI-kaaga halkan."
Waxaan sidoo kale ku qasbanaaneynaa inaan dhigno emayl lala xiriiro sanduuqa hoose qoraalka "Ku qor Emailkaaga halkan". E-maylka ayaa loo isticmaali doonaa keliya iyo si gaar ah si uu noogu wargeliyo in iPhone horey loo furay.
Waxaan gujineynaa badhanka jaalaha ah si aan u bixino adeegga. Waxaan dooran karnaa inaan ku bixinno kaarka amaahda ama PayPal.
Marka la bixiyo, waxaan sugi karnaa oo keliya inaan helno emaylka xaqiijinta oo ay noo sheegi doonaan in iPhone la sii daayay oo loo isticmaali karo hawl wade kasta.
Sidee u aragtaa, howsha furo iPhone-ka khadka tooska ah Ma fududaan karto. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ogaato hawlwadeenka terminalka ka hor intaadan sii deyn, halkan ayaan ku sharaxeynaa sida loo ogaado shirkadda iPhone-ka ah.